တူမလေး ကို တစ်ခုခု ဝယ်ပေးလိုက်သင့်ပါ၏။
သူ့ကို အကြောင်းပြုပြီး လူကြိုက်များသွားလို့။
ကိုပေါက်ကြီး၊ နွေဦး၊ လုံမလေးမွန်မွန်၊ မင်းနန္ဒာ၊ စိန်ဗိုက်ဗိုက်၊ ကဆာမိ၊ Thaw Zin Loikaw၊ မောင်ဂီ၊ ရင်နင့်အောင်၊ အလင်းဆက်၊ မောင်ဘလှိုင်၊ နန်းတော်ရာသူ၊ Yin Nyine Nway၊ စိုင်း ကွမ်းခေး၊ ရွှေအိ၊ မိုချို၊ ဦးကြောင်ကြီး၊ ကိုရင်စည်သူ၊ ကြောင်ဝတုတ်၊ ဂရင်းရိုစ်၊ မဟာရာဇာ အံဇာတုံး တို့ အတွက်လဲ ဂုဏ်ယူပါတယ်။
အပင်ပန်းခံ အချိန်ကုန်ခံ ဖတ်ရွေး လုပ်ပေးခဲ့သော ဂုဏ်သရေရှိလူကြီးမင်း များ ကိုလဲ ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း။
ရွှီ ဖြောင်း ဖြောင်းးးးး ဖြောင်းးးးး ဖြောင်းးးးးးး ဖြောင်းးးး ဖြောင်းးးးးးးးးး ဖြောင်းးးးးးးးးးးးးးး
ပထမဆုံး ဝင်ရောက်အားပေးသွားသော အရီးလတ် ကိုလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ပိုစ့်တင်သူ အိပ်ပျော်နေတုန်း ကိုယ်တိုင်ရေး ကိုယ်တိုင်ဆို သွားတဲ့ အရီးလတ်ကို အထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်း မှတ်တမ်းတင်ပါတယ်။ :hee:
အရီးလတ်နောက်က လိုက်ပါတယ် …။ မန်းဂဇက် စာချစ်သူများဆုရဲ့ အသက်ဝင်မှုဟာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပီပြင်လာပါဘီ …. စတင်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ကြတဲ့ ရွာထဲက စာချစ်သူတွေရဲ့ လုံ့လစိုက်ထုတ်မှု …။
ရွာသူ/သားတွေရဲ့ အံ့မခန်း အားစိုက်မှုတွေဟာ ကျွန်တော်တို့လို စာဖတ် ပရိတ်သတ်အတွက် အရမ်းအားရစရာ .. အားကျစရာပါ
ခုနောက်ပိုင်း ဖတ်ဖြစ်ရသလောက် သုတ၊ ရသ ထောင့်ပေါင်းစုံက ရေးသားထားမှုတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ အတုယူစရာ အားကျစရာတွေ ဖြစ်လာပါဘီ …. စာရေးသူတွေရဲ့ လေးနက်စွာ ဖော်ဆောင်မှုဟာ ထိုက်လျောက်သော ဂုဏ်ကို ပေါ်စေပါတယ်။
မန်းဂေဇက်ရဲ့ ရွာသားဖြစ်ရတာလဲ အင်မတန် ၀မ်းမြောက်မိပါတယ် … ။
တကယ်လို့များ ၂၂၂၂ခုနှစ်ထိ မန်းဂေဇက်ကြီးရှိနေအုံးမယ် အောင်မြင်နေအုံးမယ်ဆို သဂျီးလဲ တမလွန်က ၀မ်းသာနေရှာမှာပါ။
ဒီလ ဆုရသွားတဲ့ ဦးလေးဦးကျောက်ခဲနှင့်တကွ အားလုံးသော ဦးဦးဒေါ်ဒေါ် ညီအစ်ကို မောင်နှမများနဲ့ ထပ်တူ ၀မ်းမြောက်ဂုဏ်ယူ မိပါကြောင်း ……
ဦးလေးခေါ်တာ ရိုးမှ ရိုးရဲ့လား။
သဂျီးကို တမလွန်ပုိ့တာ မစောနဲ့ နော်။
ဇန်န၀ါရီလမှာ ကျင်းပမယ့် တွေ့ဆုံပွဲ ဆုပေးပွဲအတွက် လက်ချောင်မရသေးဘူး။ :hee:
အယ်…မနက် ၅နာရီပဲ ရှိသေးတယ်..စာပေဆုက အဖြေပေါ်နေပြီတော့….
ဘယ်ကတည်းက အဖြေပေါ်နေပါလိမ့်….နှစ်ယောက်တောင် အရှည်ကြီး မန့်ပြီးသွားပြီ…..
” ဂုဏ်ယူပါတယ်..ဦးကျောက်ရေ… ”
နောင်လည်း ဒီလို ပေါ့ပါးသွက်လက်တဲ့အရေးနဲ့စာတွေကိုလည်း စောင့်မျှော်နေပါတယ်ရှင့်…
ကျန်တဲ့ စာရေးကောင်းတဲ့ ရွာသူ၊ရွာသားများ အားလုံးလည်း ဒီလိုစာကောင်းတွေ ထပ်ရေးနိုင်ပါစေလို့…
၁၂. ၁၂. ၁၂ နေ့မှာ တင်မယ်ဆိုတော့ ကြာတယ်လို့ ပြောကြလွန်းလို့ ….
မနေ့က အပြီးရေးပြီး ၀၀း၀၀း ၁၂ လို့ schedule လုပ်ပြီး တင်လိုက်တာ။
တခါမှ မလုပ်ဖူးတော့ အဆင်မှ ပြေရဲ့လားဆိုပြီး ဒီမနက်ဝင်ကြည့်တော့………
ကွန်မန့်တွေ ၀င်နေတာတွေ့တော့ ၀မ်းသာသွားတယ်။ :hee:
ဒါ့ထက် နှင်းနှင်းလည်း မနက် ၅ နာရီမှာ ရွာလည်နေပြီလား။
ဂဇက်ကွန်ဖရင့်.. ဆုပေးပွဲတက်မယ့်သူတွေ.. များများစားရ၍ ..မြိုင်မြိုင်ပျော်ရေး..
( ဆန္ဒပြတာတွေ ခေတ်စားနေလို့)
ရ ရ ရ….. ဖြစ်နေအုံးမယ်။
ကိုယ်စားဆုယူပေးမယ့် တူလေးတစ်ယောက်လောက်များ မရှိဘူးလားလို့…………..
ခွိွေိ ခွိွေိ ခွိွေိ
ခွိွေိ ခွိွေိ ခွိွေိခွိွေိ
ဂုဏ်ယူ ပါတယ် ဦးကျောက်
စဖတ် မိတဲ့ နေ့ ကတည်း သဘော ကျ လွန်း လို့ စိတ် ထဲ က နေကြိတ် ပြီး ဆုပေး နေ ခဲ့ တာ။ အခု လက်တွေ့ ရ သွား ပြီ ဆိုတော့ ဦး ကျောက် အတွက် ၀မ်း သာဂုဏ် ယူ ပါတယ်။ အထူး သဖြင့် ငယ်ငယ် ကတည်း က အစ်ကို လို ချင် ခဲ့ တဲ့ ကျ မ အတွက် အကြိမ် ကြိမ် ပြန် ဖတ် မိတဲ့ ပိုစ့် လေး ပါ။
ဆု ကြေညာ တဲ့ ပိုစ့် တွေ ကိုစိတ် ၀င်စား ဖွယ် ဖြစ်အောင် စိတ် ရှည် လက် ရှည် နဲ့ အပိုင်လေး တွေ ခွဲ၊ သတ်ပုံ လေ့ ကျင့်ခန်း တွေ ပေး ပြီး အလှည့် ကျ လာတော့ မနွဲ့ စတမ်း လာ မဲ့ ဘေး ပြေး တွေ့ လို့ရွာ အပါ် စေတနာ့ တာဝန် ကျေ ပွန် တဲ့ သတ်ပုံ ဂိုဏ်း ချုပ် အန် တီ မမ ကို လည်း လေးစား စွာ နဲ့ ဂုဏ် ပြု ပါ တယ်။
final result ရောက် မှ ပေါင်း ပြီးဂုဏ်ပြု ရ လို့ ခွင့် လွှတ်ပါ။
မိုချို ရေး ခဲ့ တဲ့ ရင်ခွဲ ရုံ သရဲ ထဲက ပေး ချင် ခဲ့ တဲ့ မတ်ဆေခ်ျ့ ပါးပါး လေး (…..ရောက်ဖူး ရာဒေသရဲ့ ရန်ပွဲတွေမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ အငွေ့အသက် လေးတွေကိုပါ ပါးပါးလေး ထည့်ပြီး ပြောသွားပါတယ်……..) ကို မြင် ခဲ့ တဲ့ အကဲ ဖြတ် အဖွဲ့ ၀င် တွေ ကို ကျေး ဇူးတင် ပါတယ်။
ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ပိုစ့်ရှိရင် ဖတ်ရွေးအဖွဲ့ထဲ မ၀င်ပဲနဲ့လည်း ကို ပို့ပြီး ကိုယ်ရွေးချင်တဲ့ပိုစ့်ကို ဗုတ်ပေးလို့ရပါတယ်။
အဲလိုဗုတ်ပေးမယ်ဆိုရင် ဖတ်ရွေးအဖွဲ့ကို အားပေးအားမြှောက်ပြုရာရောက်လို့ ဖတ်ရွေးအဖွဲ့သူားတွေလည်း အားတက်ကြရမှာပါ။
final result ရောက် မှ ပေါင်း ပြီးဂုဏ်ပြု တာကိုလည်း ၀မ်းသာကျေနပ်စွာ ကြိုဆိုပါတယ်။ :hee:
ဂုဏ်ယူပါတယ် ဦးဦးကျောက် ထိုက်ထိုက်တန်တန် ကို ရသွားတာပါ စားဖို့အတွက် ဒီက မျှော်နေပါပြီ
ဆုရသူကို ဂုဏ်ပြုပြီး စားပေမယ့် ဗုံကလေးကတော့ အသံပေးနေပြီနော်။ :hee:
ဖြောင်း ဖြောင်းးးးး ဖြောင်းးးးး ဖြောင်းးးးးးး ဖြောင်းးးး ဖြောင်းးးးးးးးးး ဖြောင်းးးးးးးးးးးးးးး(ခွက်ဒစ်တူ ကိုခင်လတ်)
“မင်းသွားမဲ့ လမ်းအကူး ဖြောင့်ဖြူးဖို့အစဉ်အမြဲ တစ်ကယ်ကျိုးစားမှာပင်မလွဲ……”
ဆိုတဲ့ ဇော်ဝမ်းရဲ့ ကျောက်ခဲသီချင်းလေးသွားသတိရတယ်ဗျို့… :hee:
ကျန် စကာတင်အရွေးခံရသူ ရွာသူား စာရေးသူအပေါင်းအားလည်း
ဖတ်ရွေးအဖွဲ့ ကြီးကိုအဖက်ဖက်က ကူညီထောက်ပံ့ပေးသူ
အားလုံးကိုလည်း ဖတ်ရွေးအဖွဲ့ကိုယ်စား ကျေးဇူးအကြီးကြီး တင်ပါဂျောင်းးးးးး
ဆုရ ကြိုက်မီးက ဆုရ အုံးစတူး ကို……
စီဂျေ ကိုထူးဆန်းအလိုအရ ဆိုရင်တော့ ….
လို့…. ဂုဏ်ပုဒ် တပ်လို့ ရပြီ။ :hee:
ကွန်ဂရက်ကျူရေးရှင်းပါ ဦးကျောက်ရေ …..
မှတ်မှတ်ရရ ညကတောင်မှပြောမိသေးတယ်နော ………
တူမလေးကအမှတ်တရတွေအများကြီး ယူလာပေးတာပဲဗျ ။
ဦးကျောက်ရေးသမျှကောင်းပေမဲ့  ဒီတစ်ပုဒ်ကတော့ရင်ဘတ်နဲ့  ရေးလိုက်ပုံပဲ ။
မြောက်တာပေါ့ နော ။
ဆက်လုပ် ကိုယ့် ဆရာရေ ……..
ကွင်းဆင်းတုန်းက အတွေ့ အကြုံလေးတွေလည်း မျှော်နေမယ်နော
တူမလေးက ဦးဦးကျောက်ခဲအတွက် ကောင်းကျိုးချမ်းသာ အထွေထွေကို သယ်ဆောင်လာပေးမယ့် နတ်သမီးလေးလို့ ပြောရမယ်။
မီးနေစောင့်ရကျိုးနပ်ပါတယ်နော် ဦးကျောက်ခဲ။ :hee:
ကျနော်ကတော့ အဲတာကို ကြိုက်၏။
နှစ်သစ်မှာ ဖုတ်လှိုက်ဖုတ်လှိုက် ဖတ်ရွေးအဖွဲ့လေး အသက်ရှည်ပါစေကြောင်း …….
ဒေါက်တာရမ်းကုက ဆေးမြီးတိုနဲ့ တတ်သလောက် မှတ်သလောက် ကုနေတာပါ ကိုပေါက်ရေ။ :eee:
ဗရာကြော်ပါ ဦးကျောက် နဲ့ မာမား နဲ့ တကွသော ဖတ်ရွေး အသင်းကြီးရေ….
၁၂-၁၂-၁၂ မှာ တစ်ဦးတည်းသောသားဆီက ကွန်မန့်ရတာလည်း….
ကျက်သရေ မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံသွားပါတယ်။ :hee:
ဖတ်ရွေးအဖွဲ့ကြီးနှင့် အန်တီမမ Bravo!
လာရောက် ဂုဏ်ပြုပေးတဲ့ ရွှေအိလည်း Bravo!
အခုတော့ ကျွန်တော်အဲဒီစကားမှန်ကြောင်း လက်ခံလိုက်ပြီဗျာ။
ဦးကျောက်ခဲရေ ၀မ်းစမိုး ဗရာဗိုလ် ပါဗျို့။
ကျန်းမာရေးအသိပညာတွေ ဖြန့်ဝေပေးနေတဲ့ ကိုခင်ခ
ရွာကိုသံယောဇဉ်ရှိတဲ့ ကိုခင်ခ… ကိုလည်း ဖတ်ကူပေးမယ်ဆိုရင် ကြိုဆိုပါတယ်နော်။ :hee:
အမ မမ ရဲ့ ကြိုဆိုကြောင်း အရေးအတွက် ကျေးဇူးပါဗျ။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်က အတွေး အဖတ် အကြား တွေပေါ်မှာ အဆင်ပြေသလို ရေးသားမျှဝေတာ၊ သရော်စာမျိုးရေးတတ်တာဘဲ ရှိတာပါဗျ၊ ရသစာပေမျိုး ရေးနိုင်စွမ်းအားနည်းပြီး အကဲဖြတ်နိုင်စွမ်း လည်းအားနည်းတာမို့ ဖတ်ကူပေးဖို့ မ၀ံကြောင်းပါခင်ဗျ။
၀မ်းသာဂုဏ်ယူပါတယ်လေးကျောက်ရေ ပထမဦးဆုံးရွေးတဲ့လမှာပဲ ကိုယ်ရွေးပေးတဲ့
post က တန်းနေအောင်ဆုရသွားလို့ အရမ်းကိုဝမ်းသာဂုဏ်ယူပါကြောင်း ………
ပီတိကိုစား အားရှိပါ၏ :hee:
ဒုံး ဒုံး ဒုံး ဒုံး ( ဖနောင့်ပေါက်သံ )
ဆု ရတဲ့လူဂိုလည်း ကျေမနပ်ဘူး
ဆု ပေးတဲ့လူဂိုလည်း ကျေမနပ်ဘူး
ကလားတွေနဲ့ပေါင်းပြီး ခင်ဗျားတို့ဂို ဗန်းပြစ်မယ် ကျပ်ကျပ်သဒိထားဂျ
မိုက်မှားမိခဲ့လို့ Apoမlogy ပါတယ်။
အင်ရွာနေရှင်နယ် ပြိုင်ပွဲမို့ အကြော်သယ် ရေးတာကို မရွေးကြတာ….
(ရွာသူားအချင်းချင်း ပြောမနာ ဆိုမနာမို့ ဆန်ရင်းနာနာ ထောင်းပါသည်။
အဖွားကြီး ခြုံထဲဝင် အီးအီးပါတဲ့အကြောင်းကို ပေးလိုက်မယ်ဗျာ။.
ကိုယ့်မလည်း ညီမတွေ ပေါလွန်းတဲ့ အကိုမို့..
မေ့မရနိုင်ပဲ တွေးပီး ရယ်နေရတာဆိုတော့ကာ..
အခုလို ဆုရသွားတယ်ဆိုတော့ လက်ခုပ်အကြီးကြီးကို..
ဇကာတင်ပါတဲ့ ရွာသူားများကိုလည်း အားကျနေရင်း…
အမတ်မင်းလည်း ဦးကျောက်ခဲလို ရာထူးလိုချင်နေပြီထင်တယ်။ :harr:
လွှတ်တော်မတက် ရွာထဲမ၀င် တာဝန်မကျေတဲ့ အမတ်မင်းကို ဘယ်အုပ်ထိန်းသူကို တိုင်ရမလဲ။
ရွာသူ/သားအပေါင်းတို့ရေ အမတ်မင်းက ညီမတွေပေါလို့တဲ့ဗျို့……. ကူညီပေးလိုက်ကြစမ်းဘာာာာာာာ
ကောင်းပါဘေ့ ကောင်းကြပါဘေ့ဗျာ……. အင်မတန် ကာလာတွေ ကွဲကြတဲ့ ရွာပါပေလားဗျို့
ဟာ … ဟုတ်ပါ့ …..
ညေး (ညီလေး) အရင်က မသိလို့
မရိုမသေ လုပ်ခဲ့မိတာ ဗွေမယူပါနဲ့နော်..
ညေး လေ ..ကိုကြီး မတ်ထ် ကို ဘီဘီ တိုက်ချင်ရို့….
ပို့စ်ဖတ်ထားကြောင်း တကယ်ပြောချင်လို့ ..
ခုမှ ဆင်ဝှေ့ ရန်ရှောင် မလုပ်ပါနဲ့။
ညီမတွေ လို့ ရေးထားတယ်နော်။
ဦးကျောက်လမ်းစဉ်လိုက်ရင်လည်း နှူးဘာဂိုဏ်းသားတွေက အလွတ်ပေးမှာ မဟုတ်ဘူး။
ဘာအထုမှ ကြောက်ဘာဘီလဲ… ဦးမတ်
ဦးကျောက်လမ်းစဉ်လိုက်ရတော့မယ်ဆိုလည်း ကိုယ်တွေ့ ပို့စ်လေး ရေးတင်လိုက်ပေါ့
ဟုတ်တယ် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဖော် ဖိုးသူတော် လုပ်တုန်းကလုပ်ပီး
ဟေဟေ့ အမတ်ကြီးတော့ အမတ်ကြီးရာ အကုန်ပေးပစ်ပလိုက်စမ်းဘာာ….. ခင်ညားမှာ ညီမတွေ အညားကြီးချိဒယ်ဆိုတာ ကျုပ်သိတယ်နော်…..
ဖလောင်း .. ဖလောင်း .. ဖလောင်း …
ဦးးး ဦးးး ဦးးးရေးကျောက် ..
ဂယ်လို့ ဦးးးရေးကျောက် ဆု လာမယူနိုင်ရင် ပူနေဘာနဲ့ရို့..
တူလေးငအံစာ က ယူပေးဘာမယ် …
ဦးးရေးဂို ကျုပ် အရင် ချိတ်ထားဒါနော် ..
ပီးဒေါ့ .. ကျုပ်က တီနတ်လည်း ပီးဒယ် … ငွင်း .. ငွင်း ..
ပို့စ်က မိုက်ဒလယ်ဂျို့ …
ရွေးချယ်ခံရတဲ့ ပို့စ်တွေ အတုန်လုံး
ဘာကြောင့် ရွေးရတယ်ဆိုတဲ့ မှတ်ချက်လေးတွေပါ ဖတ်သွားရလို့ ..
ကြည်နူးမှုတွေ ဖြစ်စေမှာလို့ …
ခပ်ချာချာမို့ပဲ ဦးလေးခေါ်တာ မြန်ထှာ။
လက်ခုပ်သံတောင် သူမတူအောင် တီးပေးတာ။
ပိုစ့်က မိုက်ဒလယ်ဒါ မဟာရာဂျာဂျီး ကျေးဂျူးတွေ အများကြီးပါဘာဒယ်။
အပေါ်ကလူတွေရဲ့လက်ခုပ်သံတွေထက် ပိုကျယ်အောင်တီးသွားပါတယ်ရှင့် :D
လက်ခုပ်သံ ပိုကျယ်အောင် တီးပေးတဲ့သူကို….
အတည်မပြုနိုင်တဲ့ ရပ်ကွက်က သတင်းမကြားပါဘူး။ :harr:
ကျန်တဲ့ ဆုရသူတွေနဲ့ ဆန်ခါတင်တွေကိုလဲ ဗရာဗိုပါ လို့ ပြောပါရစေ
ကိုယ်ပေးထားတဲ့ မှတ်ချက်ကို ကိုယ်တိုင်ပြန်ဖတ်ရတဲ့ ခံစားမှုကိုတော့ အခုမှ ခံစားဖူးတယ်
အင်းးးးးးးးးးးဦးမာဃ ဒီလလဲ ဖတ်ကူပေးရင် ကောင်းမလားးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
ဆက်လက်ဖတ်ကူပေးဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်။ :hee:
လက်ခုပ်သံအကျယ်ကြီးတီးပြီး Congratulate လုပ်ပါတယ်။ ဖတ်မိ၊ ကြိုက်မိ၊ မန့်မိတဲ့ ပို့စ်ရတာမို့ ၀မ်းသာပါတယ်။ ဒါနဲ့ အဲဒီ့အထဲက ဇတ်လိုက်မင်းသမီးလေး နာမည်ရွေးလို့ရသွားပြီလားဟင်….
ဒီပို့စ်တွေကို ဘာကြောင့်ရွေးချယ်ထားရတာလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းလေးတွေပါ တင်ပေးထားတာ တွေ့ရလို့ ဖတ်ရွေးအဖွဲ့ကြီးရဲ့ transparency ရှိမှုကို လေးစားမိပါတယ်။ ကိုယ်ကျိုးတစ်ခုမှမရှိပဲ အချိန်ကုန်ခံ၊ လူအပင်ပန်းခံ၊ စိတ်အပင်ပန်းခံပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်း လုပ်နေကြတဲ့ဖတ်ရွေးအဖွဲ့ကြီးကိုလည်း congratulation ပါ လို့ပြောချင်ပါတယ်။
ဘယ်ပိုစ့်ကို ဘာ့ကြောင့်ကြိုက်တယ် ဆိုတဲ့ ဖတ်ရွေးသူတွေရဲ့ အမြင်သဘောထားလေးတွေက ….
တစ်ယောက်တစ်မျိုး မရိုးနိုင်တာကိုက ချစ်ခင်နှစ်သက်ဖွယ်လို့ ယူဆလို့ …….
အခုလို ရေးတင်ဖို့ စဉ်းစားမိတာပါ။
Green Rose ကိုလည်း စိတ်ဝင်စားလို့ ဖတ်ကူပေးမယ်ဆိုရင် ကြိုဆိုပါတယ်နော်။ :hee:
အာဝေနိက ချစ်ဒုက္ခကို အကြိုက်ဆုံးရွေးတဲ့သူတွေထဲမှာ ဦးဖောတစ်ယောက် အပါအ၀င်ပါ ဆိုတာလေးးးးးးး :hee:
ဂဇတ် ရွာသူ/ရွာသား စာရှုသူအများ
ကျွန်တော်ဦးကျောက် မရည်ရွယ်ပဲ အရွေးခံရလို့ အထူးပဲ အံ့ဩဝမ်းသာရပါတယ်…..
ဂဇတ်အပြင်ကနေ စာဖတ်နေတာ ၂၀၀၈/၉ လောက်ကတည်းက ဆိုပေမည့်၊ စာစရေးတာတော့ ဒီနှစ် ဂျူလိုင်ကမှပါ
ဘဝပေးအရ စိတ်သိပ်မညစ်တတ်သလို ဘယ်သူ့ကိုမှလဲ ကိုယ့်ကြောင့်မခံစားစေချင်တာမို့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ရယ်စရာပဲ ရေးဖြစ်ပါတယ်
ယခု လာမယ့်ဘေးပြေးတွေ့ခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာလ အတွက် သတ်ပုံ အန်တီမမ နှင့် ဖတ်/ရွေး အဖွဲ့
တူမကလေး နာမည်ရွေးပေးခဲ့တဲ့ “ဦးဦးပါလေရာ” ( ဧကရီ )
ရန်ကုန်ဆုပေးပွဲပြန်ဖို့ လေယာဉ်လက်မှတ်ခ တစ်ဝက် စိုက်ပေးတဲ့ ဂဇတ်သူကြီးမင်း ဦးကိုင် နှင့် တကွ
ရွာသူ/ရွာသား အပေါင်းကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ် ခင်ဗျား
(မည်သည့်လက်မှတ်ဖြစ်ကြောင်း စုံစမ်းခြင်း သီးခံပါ)
နေကန်းဒလားဂျ … အဟီးးးး
ခုထဲဂ ဖားထားရဒါ …
ဟယ် ..တို့ သာဂျီး မင်း ဦး ကိုင် က ဆုပေး ပွဲ ပြန်ဖို့ လေယာဉ် လက်မှတ် တစ်ဝက် စိုက် ပေး တယ်တဲ့ လား။
အဲဒါ ဆို သူများ ကို လည်း စိုက် ပေး လေ။ သူများ လည်း ဆု ယူ ရ မှာ။
မျက် ဖြူ စိုက် မသွား နဲ့ ဦး နော် သူဂျီး၊ အလကား စ တာ။ လေယာဉ် လက်မှတ် အလကား ရ ရင် တောင်ပြန်လာ လို့ မရ သေး ဘူး။ အိမ်က လူကြီး ခွင့် ရ တဲ့ ရက် နဲ့ တိုက် မှ( တရုတ် နှစ်ကူး ပြီး မှ) ပြန် လာ လို့ ရမှာ။ ဂဇတ် တွေ့ ဆုံ ပွဲ ကို လာချင် လွန်း လို့ တပိုင်း သေ နေပြီ (ဘယ် အပိုင်း လဲ တော့ မမေးနဲ့) ။ ကိုယ့် ကိုယ် ကို မပိုင် တဲ့ ဘွ ဆိုတော့ ဒွက်ခ…ဒွက်ခ….ဒွက်ခ။
(ဒီ အချိန်မှာ အပျို ကြီးတွေ ကို အား ကျ မိ ပါ ဘိ)။
မိုချိုရေ သာဂျီးမင်း ဦး ကိုင် က ဦးကျောက် ဆုပေးပွဲပြန်ဖို့ လေယာဉ် လက်မှတ် တစ်ဝက်စိုက်ပေးတာ အပြန်ခရီးစဉ်အတွက်ဖြစ်နေလို့ အဲဒီလေယာဉ်လက်မှတ်အသုံးတည့်ဖို့ အတွက် အသွားခရီးစဉ် ၀ယ်ရခက် မ၀ယ်ရခက်နဲ့ ဦးကျောက်ခဲတစ်ယောက် ထိုင်လိုက် ထလိုက် အခါခါမို့ ဘေးကဘော်ဒါတွေက ကျန်းမာရေးလေ့ကျင့်ခန်း လုပ်နေတာလားတောင် မေးကြ ဆိုဘဲဗျာ။
ထိုင်လိုက် ထလိုက်လုပ်နေတယ်ဆိုတော့ ဝိတ်တော့ ကျသွားမှာပါ
ထိုင်လိုက် ထလိုက်လုပ်နေတယ်ဆိုတော့ ဝိတ်တော့ ကျသွားမှာပါ အဟီး
ကျောက်ခဲအချွန်နဲ့ မ ခံရတဲ့သဂျီး။
ထိုင်ရခက် ထရခက် ဖြစ်နေပုံကို မြင်ယောင်ကြည့်လိုက်အုံးးးးးးး :harr:
ဦးကျောက်ကတော့ သဂျီးမင်းကို အချွန်နဲ့ မ လိုက်ပြီ
12-12-2012 နေ့မှာ တင်လိုက်တဲ့ နုိုဝင်ဘာလအတွက်ဖတ်ရွှေးအဖြေလေးက နေ့တောင်မကူးဘဲ အပေါ်တက်ကပ်သွားတော့ အားလုံး အလွယ်တကူဖတ်လို့ရသွားတာ ၀မ်းသာစရာပါ။
ကျနော်ပြီးခဲ့တဲ့လမှာ တင်တုံးကတော့ ပိုစ်သုံးပုဒ်ကို အစဉ်အလိုက်တင်ခဲ့ပါတယ်။
9-11-2012 (11-11-2012)မှာထွက်ပေါ်လာမယ့် သူ့ကိုခန့်မှန်းကြရအောင်
ဒါပြီးခဲ့တဲ့လက ဖတ်ရွှေးအဖွဲ့ကိုယ်စား အစဉ်အလိုက်တင်ခဲ့တဲ့ပိုစ်လေးပါ
11-11-12 နေ့မှာ အမှတ်တရဖြစ်အောင်တင်မယ်လို့လဲ ကြိုတင်ရေးထားခဲ့ပါတယ်.။
ဒါပေမယ့် နိုဝင်ဘာလရွေးတဲ့ ဆန်ခါတင်စာရင်းသာပေါ်သွားတယ် ကျနော်အပြီးသတ်ရွေးခဲ့တဲ့
အဲဒီပိုစ်က ကျနော်အတွက်သီးသန့် ရေးတဲ့ပိုစ်မဟုတ်ပါဘူး။
အယ်ဒီတာချုပ်လုပ်တဲ့သူက မအားလို့ မသိလိုက်လို့ မဖတ်ဖြစ်လိုက်လို့ အထက်တက်မကပ်ဘူးဆိုရင်
သူကြီးပြောထားတဲ့ အဆင့်မြင့်ပေးထားတဲ့ သူများက “ဒါကတော့ အများနဲ့ဆိုင်တဲ့ပိုစ်ဖြစ်လို့ အထက်တင်ပေးသင့်ပါတယ်”လို့ အကြံပေးသူမရှိဘူးလား။
အရှင်းဆုံးပြောရလျင် ကိုပေါက် သူများအပေါ်မနာလိုစိတ်မရှိပါ။
သို့သော် ကွာခြားမူ့က သိသာ ထင်ရှားလွန်းနေပါသည်။
ရွာအတွက် အများအတွက် ကိုယ်စား အလုပ်လုပ်ပေးနေသော ရွာသူားအခြင်းခြင်းအပေါ်တွင်
အကယ်၍ ကျနော်အပြီးသတ်ရွေးသောပိုစ်ကို မမြင်မိ မဖတ်မိ ၍ အပေါ်ကပ်မပေးသည်ဖြစ်စေ
ကျနော်ရေးသားမှူ့ ညံ့ဖျင်း၍ အများ လက်မခံနိုင်သောအကြောင်းအရာ ပါ၍ဖြစ်စေ အပေါ်တင်မပေးဟု
ကျနော်ဖတ်ရွေးအဖွဲ့တွင်ပါဝင်နေခဲ့ခြင်းအတွက် နှစ်သက်သဘောကျသူ ရှိသလို
မနှစ်သက် သူ အလိုမကျသူများရှိသူများလဲ ရှိနိုင်ပါသည်။
ထို့ကြောင့်လည်း ကျနော် လာမည့် 2013 တွင် ဖတ်ရွေးအဖွဲ့မှနူတ်ထွက်ခွင့်တောင်းပြိး နူတ်ထွက်ပြီးဖြစ်ပါသည်။.
သို့သော် မန်းလေးဂေဇက်ရွာက တော့ ရေးခွင့်ရသ၍ ရေးနေမည် ပုံတင်နေအုံးမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကျနော်တင်သည့်ဓါတ်ပုံ ကျနော်ရေးသည့် အတွေးပါးပါးများကို လက်ခံနေသူ ကြည့်ရူ့နေသူ
ကျနော်ပရိတ်သတ် လူနည်းစုအတွက် ရပ်တည်နေအုံးမည် ဖြစ်ပါသည်။
အများပျော်ရွှင်နေချိန်တွင် ယခုလိုရေးသားရခြင်းမှာ ဖတ်ရွှေးအတွက် နောင်လူများအတွက် ရေးပေးရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ကျနော့်ကဲ့သို့ မေ့လျော့ ခံရလျင် စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်သွားမှာစိုးသည်အတွက် မမေ့လျော့အောင် ရေးသားပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ယခုလိုမင်္ဂလာမရှိ ကျက်သရေမရှိသော စကားကိုပြောရသည့်အတွက် ၀မ်းနည်းပါသည်။
သူကြီး ကို အဲလို ကပ်ဖို့ သူ့ရဲ့ စာကိုယ်မှာပါ တောင်း ခဲ့ရ တာပါဗျ။
သူကြီး အလုပ်များပြီး မေ့တာကို ရိပ်မိလို့ ကျုပ်တောင် ကပ်ထားပြီး Post မှာဘဲ ဝင် ပြင်လိုက်တာပါ။
သစ်စိမ်းချိုးမချိုးနဲ့နော်။ နိုမှာဘဲ။ ဗြဲ ဗြဲ ဗြဲ ဗြဲ ဗြဲ ဗြဲ ဗြဲ ဗြဲ ဗြဲ ဗြဲ။
တစ်ကယ်တော့ ကျနော်လည်းအံ့ သြခဲ့ ပါ၏ ။
တစ်ချို့ ရွာသူားများမှာ မည်သူဆုရသည်ကိုမသိလိုက်ကြပါ ။
ကိုယ်ထိမှ ကိုယ်သိဆိုသလို မသိလိုက်ဘူး။
စီဂျေဆာမိ သိလိုက်တာကို စတစ်လုပ်ဖို့ တစ်ချက်လောက် အော်ပေးလိုက်ရင် အကောင်းသား။
ခုခေတ်ကြီးမှာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်တာတွေ ခေတ်စားနေတယ်။ :harr:
ကိုယ့်ပိုစ့်လေး စောစောစီးစီး အပေါ်ကပ်ပေးထားတာ တွေ့လိုက်တော့ ၀မ်းသာမိတာတော့ ၀န်ခံပါတယ်။
ကျမက ဆုရွေးတဲ့ပိုစ့်ရေးပေမယ့် စတစ်ကီလုပ်ပေးလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်မထားခဲ့ဘူး။
အဲဒါကြောင့် မိတ်ဆက်နိဒါန်းမှာတောင် ကံကောင်းတယ်လို့ ရေးခဲ့မိသေးတယ်။
ဒါပေမယ့် ဆန်ခါတင်စာရင်း ပိုစ့် တင်တဲ့အခါကျတော့ ….
ပိုစ့်ခေါင်းစဉ်ကလည်း မိတ်ဆက်နိဒါန်းနေရာမှာ စာကိုယ်လို့ပဲ ပြောင်းပေးထားတော့…..
မန့်တဲ့သူတွေက ပထမပိုစ့်နဲ့ မှားနေတယ်လို့ ပြောကြမှပဲ…..
ကွဲကွဲပြားပြားဖြစ်သွားအောင် ဆန်ခါတင်စာရင်းလို့ နာမည်အသစ်ပြန်ပြင်ပြီး …..
သဂျီးကို စတစ်ပေးဖို့ (မရှက်မကြောက်) ကိုယ်တိုင်ပဲ ပြောလိုက်ပါတယ်။
ကိုယ်ထိမှ ကိုယ်သိဆိုသလို ကိုပေါက်ရဲ့ပိုစ့် ဟာ အများနဲ့ဆိုင်လို့ စတစ်ဖြစ်ရမှာ ဖြစ်ပေမယ့်…
ကိုယ့်ပိုစ့်မဟုတ်လို့ သတိမထားမိဘူးဆိုတာကိုလည်း ၀န်ခံပါတယ်။
ကိုပေါက်အနေနဲ့လည်း ဘက်လိုက်တယ်လို့ မယူဆပဲ (ကိုယ့်ကို စတစ်ကီပေးထား၍ပြောခြင်းမဟုတ်ပါ)
ကျမလိုပဲ (မရှက်မကြောက် :harr: ) ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင် အဆင်ပြေသွားမယ်ထင်ပါတယ်။
သဂျီးခမျာလည်း ဒီအလုပ်တစ်ခုတည်းလည်း မဟုတ်၊
အချိန်ပြည့်လည်း မပေးနိုင်တာမို့ နားလည်ပေးဖို့ တောင်းပန်ချင်ပါတယ်။
ဘာကြောင့်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် စိတ်ဝမ်းကွဲကြမှာကို မလိုလားပါ။ :eee:
အဲဒီ Sticky ကိစ္စ စိတ်ထဲ မထားပါနှင့်ဗျာ ။
သူကြီး ခမျာမှာလည်း ဒီ ဂဇတ် တစ်ခုလုံး ရဲ့ ကိစ္စ လုပ်ရ ၊
သူ့ရဲ့ စားဝတ်နေရေးအတွက် အလုပ်လည်း လုပ်ရဦးမယ်ထင်တယ် ၊
သူ တစ်ယောက်တည်းနှင့် ဂျင်ခြေလည်နေပုံ ရပါတယ် ။
ထုတ်ပြောဗျ ၊ ထုတ်ပြောလိုက်ဗျ ။
အခု မမ Post ၊ sticky ရသွားတာကလည်း ထုတ်ပြောလိုက်လို့ဖြစ်မယ်ဗျ ။
ဥပမာပေးရရင် ၊ ကိုယ့် အဖြစ်အပျက် နှင့်ပဲ ကိုယ်ပြောရမှာပဲ ။
ကျနော့်တုန်းကလည်း ရွာမှာလည်း တော်တော်ကြာ ၊ Post တွေလည်း တော်တော်များပြီး ၊
Point ကလည်း တစ်သောင်းကျော် နေပြီ ၊ contributor မ ဖြစ်သေးဘူးဗျ ။
( အမှန်က Point တစ်သောင်းကျော် ရင် ပုံမှန်ဆို contributor ပေးရမှာလေ )
အဲဒီလိုနှင့် နေလာတာ ဟိုတစ်လော အေးဝတီကြီး ဓါတ်ပုံတွေ တင်ပါလေရော ၊
အဲဒီမှာ ပြဿနာတွေ တက် ၊ ဟိုဘက် ဒီဘက် ဆဲရေး လာကြပြီး ၊
တစ်ချို့ ပြဿနာ ရှိတဲ့ Post တွေကို ကြည့်ခွင့်တွေကို ပိတ်ချလိုက်တယ်လေ ။
အဲဒီအခါမှာကျမှ ၊ ကျနော်က ၊
” သူကြီးရေ ကျနော်လည်း Post တွေ ကြည့်မရတော့ပါဘူး ၊ ကူပါအုန်း ” ဆိုပြီး ထအော်တယ်လေ ။
အဲဒီတော့မှ ၊ သူကြီး က ကျနော် Point တစ်သောင်းကျော် နှင့် သာမန် ဖြစ်နေတာကို ၊
သတိထားမိပြီး ၊ Contributor အဆင့်ကို အဲဒီတော့မှ တိုးပေးတာဗျ ။
ပုံစံကတော့ ၊ သူ က အလုပ်ရှုပ် / များ ပုံရတယ်ဗျ ၊
အဲတော့ ၊ ဖြစ်သင့်တယ်ထင်ရင် လှမ်းသာပြောလိုက်ဗျ ။
ရွာပေါ်တက်ပြီး မအော်ချင်ရင်လည်း ၊ Mail နှင့် ပို့လိုက်ပေါ့ဗျာ ။
အဲဒီစတစ်ကီလုပ်တာက … ရွာထဲကစာဖတ်သူတွေအတွက်.. အရေးကြီးတယ်မထင်မိဘူး..
အရင်ကဆို.. အားရင်သေသေချာချာပြန်ဖတ်ဖို့.. သူများတွေကိုပါပေးဖတ်စေလိုတဲ့ဆန္ဒရှိတဲ့ပို့စ်တို့.. စတာတွေကို.. ကိုယ့်အကြောင်းနဲ့ကိုယ်.. အားရင်အားသလို.. စတစ်လုပ်ထားတာပါ..။
အဲဒီနေရာက.. အယ်ဒီတာ့ရုံးခန်းထဲက.. ၀ွိုက်ဘုတ်လိုပါပဲ..
အဟောင်းကြီးမေ့ပြီးထားချင်ထားမယ်..။ ရုတ်တရက်သတိရလို့.. ပြေးရေးချင်ရေးမယ်..။
လက်ထဲကဆဲလ်ဖုံးမှာ.. မှတ်ချက်ရေးပြီး.. တက်မကပ်ပဲ..ပြီးချင်ပြိးမယ်..။
လူတွေက..Category နဲ့ရွေးဖတ်နေတယ်လည်းထင်ပါတယ်….။ အဲဒါကြောင့်..ဖတ်ရွေးအတွက်.. Best Web Awards ဆိုပြီး.. ကက်တဂရီတခုတောင်လုပ်ထားသေး…။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်… နောက်ဆိုသတိထားပါ့မယ်..။ :harr:
..မော့ဒ်တွေက.. ဖတ်ရွေးအဖွဲ့နဲ့ အလုပ်သဘောမဆိုင်ပါဘူး..။
နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့.. ပြသနာဖြစ်နေ..ဆဲနေတဲ့ကော်မန့်တွေ.. ပို့စ်တွေကို.. မောဒရိပ်လုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်နော…
ကိုပေါက်ကတော့.. မန်းဂဇက်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကနေ..ပုံနှိပ်သတင်းစာက.. ကောက်ယူတဲ့စာရေးဆရာတွေထဲ.. အများဆုံးရွေးချယ်ဖော်ပြခံရသူပါ…
ဖြစ်နိုင်ရင်.. ဖတ်ရွေးအဖွဲ့ထဲ.. ဆက်ပါနေသင့်တယ်လို့တော့ ထင်ပါတယ်..။
ဦးပေါက်ကို သဂျီးတမင် ညစ်တယ်လို့ ထင်သာပဲ….။
အန်တီမမ ပို့စ်အတွက် ဗရာဗိုပါ…..။
ဟောဒီမှာ.. တူမတော်ကိုအပျော်လှမ်း(ကမ်းလှမ်း.. အထာပေး) ပြီး.. ပြေးနေတဲ့သူ..
လူတွေ ရုန်းစု ရုန်းစု နဲ့ဘာလုပ်နေကြတာပါလဲလို့ ၀င်ကြည့်လိုက်တာ
လက်စသတ်တော့ စာပေဆု ပေးပွဲးကျင်းပနေတာကိုဗျ။
ပို့စ် + ကွန်မန်း များအားလုံးကို အားပေးသွားပါကြောင်း . . . . . . .
ှဆန္ဒထုတ်ဖော်နေကြတယ်လို့ ထင်များသွားသလား မောင်ရွေ့လျား ရယ်။
မင်း ရည်မှန်းသူကxxx မြခဲxx စိန်ခဲxxx
ကိုယ့်မှာတော့xx လမ်းခင်းတဲ့ ကျောက်ခဲxxx
ဟီးးးးး… ဦးကြီးမိုက် က ဇော်ဝမ်းရဲ့ကျောက်ခဲ သီချင်းဆိုတော့.. အားကျပီးလိုက်ဆိုလိုက်တာ…
ဆက်ပြီးတော့လည်း ကိုယ်တွေ့ အတွေ့အကြုံလေးတွေ ပြန်လည်မျှဝေ ပေးပါအုံးလို့…
ကျန် ဆုရရှိသူများအတွက်လည်း ဂုဏ်ယူ ၀မ်းမြောက်မိပါကြောင်း…….. :hee:
ခုတော့ ပတ္တမြားခဲ ဖြစ်သွားပြီ။
စာပေဆုပေးပွဲမှာ ကျေးဇူးတင်စကား ပြောဖို့….
ခုကတည်းက အကယ်ဒမီပေးပွဲမှာ မင်းသား မင်းသမီးတွေ ကျေးဇူးတင်စကား ပြောတာတွေ ကြည့်ပြီး အိုက်တင်လေ့ကျင့်နေတယ်လို့ ပါပါရာဇီ ကထူးဆန်းထံမှ သတင်းရရှိပါတယ်။
(ပြောမယ့်သာ ပြောရတယ် ပါပါရာဇီကိုတောင် ဘယ်လိုက်ရှာရမှန်း မသိ) :buu:
ခု ညီမလေးအပေါ် ထားတဲ့မေတ္တာက စိတ်ကောင်း ဆိုတော့ စာကောင်းတပုဒ် ဆုရတယ်ဆိုတာ
ပြီးတော့ ဦးကျောက်ခဲဆိုပေမဲ့ ဝါဂွမ်းဆိုင်လို့ နူးညံ့တဲ့နှလုံးသားပိုင်ရှင်ဖြစ်တယ်လို့မှတ်တမ်းတင်ပါရစေ။
အစ်မ မမနဲ့ ဖတ်ရွေးအဖွဲ့ဝင်များအားလည်း လွန်စွာလေးစားမိပါတယ်။
အများအတွက် ကြိုးစားမှုက ရှင်းလင်းချက်တွေနဲ့အဖြေရလာဒ်ကထင်ရှားစေပါတယ်။
သူကြီးက စာရေးဆရာတွေ တင်မက အယ်ဒီတာတွေပါ မွေးပေးနိုင်သော ကွင်းပိုင်ကြီးပါဘဲဗျာ။
အထက်တန်းကျောင်းတုန်းက မြန်မာစာ သင်တဲ့ဆရာမက စာရေးသူရဲ့ စေတနာ ဆိုတာကို ရှင်းပြတုန်းက အတော်လေး သဘောကျခဲ့မိတယ်။
မြတ်စွာဘုရားက သုမေဓာရှင်ရသေ့ဘ၀မှာ နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါလျှက်နဲ့ သတ္တ၀ါအများ ကောင်းကျိုးအတွက် လေးအသင်္ချေ နဲ့ ကမ္ဘာတစ်သိန်း ပါရမီဖြည့်ခဲ့တယ်လို့ ကြားဖူးပါတယ်။
အများကောင်းကျိုးကို ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ဘက်က နိုင်သလောက် စွမ်းဆောင်ချင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း လူရွှင်တော်တွေ ပြက်လုံးထုတ်ကြသလို …..
အားရပါးရ က ချင်ပါသော်လည်းးးးးးးး ကျန်းမာရေးက မကောင်းးးးးးး :eee:
အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ဒီရက်ထဲမအားလို့ ပို့စ်တခုမှမဖတ်ဖြစ်ဘူး။ ဆုရပို့စ်လည်းမဖတ်ရသေးဘူး. အခုပဲ ကော်ပီလုပ်သွားတယ်။ ဆုရသူ ဦးကျောက်ခဲ Congratulations!
ပို့စ်နဲ့မဆိုင်တာမေးချင်လို့ မမရေးထားတာ နာမည်ရွေးပေးဘို့ ( အဲဒါ ဘို့၊ဖို့ ) ဘယ်တခုက အမှန်လဲ… ကျမ မြန်မာစာတခုရိုက်နေတာတော်တော်ပြသနာတက်နေလို့… စကားပြောလိုရေးတာမျိုးမှာ ပဲ၊ဘဲ…ဖို့၊ဘို့…. ကာ၊ခါ….တို့၊ဒို့… အဲဒါတွေပြသနာတက်နေတယ်.. သတ်ပုံကျမ်းကိုတော့ဖတ်တယ်. တချို့ကို သိပ်နားမလည်ဘူး. လာရှုပ်တယ်ဆိုပြီး သူများကိုအော်မထုတ်ပါနဲ့နော်.
သတ်ပုံမှန်စေချင်လို့ ကိုယ်သိသလောက် ပြောနေတာဖြစ်ပေမယ့် မြန်မာစာကို ဂဃ နဏ သိသူ၊ ကျွမ်းကျင်သူ မဟုတ်ပါ။
အဲဒါကြောင့် မှားတာတွေကို ထောက်ပြရင်း ပြုပြင်ရင်းနဲ့ အမှန်ဖြစ်လာဖို့ ကြိုးစားချင်ပါတယ်။ လို့ ထည့်ရေးထားတာ။
ကိုယ်တိုင်တောင် ဆန်ခါတင်စာရင်းလို့ ရေးချင်တာ…
စကာ လား၊ ဇကာ လား မသိလို့ သတ်ပုံကျမ်းသွားရှာတာ မတွေ့ဘူး။
နောက်မှ ဦးမာဃရဲ့ ကွန်မန့်မှာ တွေ့ပြီး စာလုံးပေါင်း အမှန်ကို သိသွားတာ။
စာရေးရင် မသိ “ပဲ” ၊ ရွေးပေးရန်၊ ရောက်ကာစ၊ ငါတို့
စကားပြောမှာ “မသိဘဲ” ၊ ရွေးပေးဖို့၊ ရောက်ခါစ၊ ငါဒို့
လို့ သုံးမယ် ထင်ပါတယ်။
ဦးမာဃ ကွန်းမန့်မှာ တွေ့တာ ဟုတ်လို့လား
အီးမေးပို့တော့ တွေ့တာ မဟုတ်ဘူးလား
ဦးမာဃ ကတော့ အတတ်နိုင်ဆုံး သတ်ပုံ မှန်အောင် ရေးပါတယ်
ဦးမာဃ အဲလို အကူအညီဖြစ်တဲ့အတွက်လဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
တစ်လက်စတည်း သတ်ပုံအဖွဲ့ ဝင်ရင်ကောင်းမလား လို့
ရာပြည့် ကွန်းမန့် အနေနဲ့ မန့်လိုက်တယ်နော်
ပထမဆုံး အလောသုံးဆယ် ပြောချင်တာ ခရစ်စတယ်လိုင်းဂလေးကို ဦးကြောင် ခြစ်တယ်။
ဖို့ စာလုံးကို နာမ်၊ တြိယာ နှစ်ခုစလုံးအဖြစ် သုံးတာတွေ့တယ်။ ဥမပါ – ဖို့မြေ၊ လမ်းချိုင့်ကွက်ကို မြေဖို့ပါ.. ဘို့ ကြတော့နာမ် သက်သက်မှာပဲ သုံးတယ်ထင်တယ်၊ ဥမပါ – နွားကျောကုန်းမှာ ဘို့ရှိတယ်..။ (ငါ့ဖို့ သူ့ဖို့ ကိုကြတော့ ရှုတ်ချတဲ့လေသံနဲ့ဆိုရင် ငါ့ဘို့ တဘို့ထဲ ကြည့်တဲ့ကောင် သုံးသလိုပဲ။ မသေချာဘူး အန်တီမမ ကိုမေးကြည့်။ ထင်တာတော့ ကဲ့ရဲ့တဲ့လေသံ နဲ့ဆိုရင် ဘကုန်း ဘို့ သုံးပြီး သာမာန်ဆိုရင် ဖဦးထုပ် ဖို့ သုံးလား မသိဘူး)
ပဲနဲ့ဘဲ အလွယ်ခွဲနည်း ကိုးတန်းတုန်းက သင်ဘူးတာ “မ”နောက်မှာ ဘဲလိုက်တယ်” အငြင်းဝါကျ “မ” ခံရင် ဘကုန်း ဘဲသုံးပါ။ ကျန်တာတွေက ပစောက် ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နာမ်အအသုံးအနှုန်းဆိုရင်တော့ ဘဲသက်သက် ဖြစ်ကောင်းတယ် ဥမပါ – ခရစ်စတယ်လိုင်းဘဲ ဦးကြောင်ဆိုတာ ငြင်းအုံးမလား..။
တို့၊ ဒို့ကတော့ အန်တီမမ ပြောသလို စာသံပေသံနဲ့ဆို တို့၊ စကားပြောလေသံနဲ့ဆို ဒို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဆန္ဒပြပွဲ ကြွေးကြော်သံ အော်တဲ့အခါ ဘယ်သူမှ တို့အရေးလို့ အော်တာ မကြားဖူးဘူး၊ အားလုံး ဒို့အရေးပဲ အသံထွက်တယ်။ အဲဒီမှာလည်း တို့ သည် နာမ်၊ တြိယာ နှစ်ခုစလုံး သုံးတာတွေ့တယ်။ ဥမပါ – ဦးကြောင် အသဲနှလုံးကို ငပိရည်နဲ့ တို့မစားလိုက်ပါနဲ့ကွယ်။ တို့ကိုခြစ်ရင် ကြောင်သားမစားပါနဲ့။ တို့နဲ့ဒို့ဆိုရင် ဒို့က ယောက်ကျားသံ၊ အားပါသလို ပဲ။ (ကြည့်… “မ” မဟုတ်လို့ “ဘဲ” မလိုက်ဘူး)
ကာ၊ ခါ မှာလည်း ကာသည် ကာကွယ်ခြင်း၊ ကိုင်စွဲခြင်း နာမ်၊ တြိယာ နှစ်ခုစလုံး သဘောဆောင်တယ် ခံစားမိတယ်။ ဥမပါ – လုပ်ကာနေမယ်၊ ခြစ်ကာနေမယ်၊ ကာကွယ်ပါ၊ ကာချုပ်။ ခါ ကကြတော့ အပြင်ကို တွန်းလှုပ် တွန်းထုတ်တဲ့ လေသံပေါက်တယ်။ ဥမပါ – စီတုံးတို့များ ခါနေတာပဲ အောင်ပုရှေ့ကြရင်။ ဒီတခါ နောက်ဆုံးပဲနော် နောက်တခါဆို ခြစ်တယ်ပြောမှ ရမယ်။
Me: ဘရာဘိုပါ ဆုရှိသူများခင်ဗျ.
Me: ဘရာဘိုပါ ဆုရရှိသူများခင်ဗျ မွှားသွားလို့ချောတီးပါဗျို့ 
ဆုရှိသူကို မုန့်ကျွေးအောင် ကိုအောင်က ဘရာဗိုချင်တာထင်တယ်။ :hee:
ဖတ်ရွေးအဖွဲ့ကြီးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဆုရသွားတဲ့ အူးအူးစတုန်းအတွက်လဲ ဂုဏ်ယူဝမ်းသာမိပါတယ်။
နန်းတော်ရာသူရဲ့ ပိုစ့်တွေလည်း ဆန်ခါတင်ထဲမှာ တွေ့နေရတယ်နော်…….
ရေးလက်ကောင်းတစ်လက်ဆိုတာ သိနေတာမို့ ကြိုးစားရေးပါ။
ဦးကျောက်ခဲရဲ့ အာဝေနိကကို စာကြည်စားပွဲအောက်မှာခိုးဖတ်ကြည့်ပြီး တခိခိလုပ်နေခဲ့ရတာ။
ဦးကျောက်ခဲရဲ့လက်ဟာ ကျောက်ခဲထုရုံမက ဆုရမယ့်လက်လို့ အစကတည်းက မှန်းလို့ရကြပါတယ်။
ကြုံတုန်းလေး ပြောချင်တာက ဆုရပြီးတဲ့သူတွေ ဘာလို့အရေးကျဲ အရေးနည်းသွားလဲဆိုတာ စဉ်းစားရခက်နေပါတယ်။
၀င့်ပြုံးမြင့်ကတော့ ကိုဝင်းကြည်နဲ့ဆိုတော့ ထားပါတော့နော်။
အောင်မိုးသူ၊ဦးကြီးမိုက်၊ ၂ယောက်လုံး ရေးအားကျသွားပါတယ်။
မိုချိုကမှ ဒီလလည်း ဆန်ကာတင်ထဲပါတာအပြင် ရေးနေသေးတယ်။
ဆုရပြီး/ မရပြီးသော စာရေးကောင်းသူတွေ အများကြီး အများကြီး ………..
ဆက်လက် ရေးအားကောင်းဖို့ မျှော်လင့်နေပါတယ်။ :hee:
မိရွှေကြည်ကတော့ ပိတ်သတ်ပဲလုပ်မယ် လက်ခုပ်တီးပေးမယ်..။
ကိုယ့်ရွာနဲ့ ကိုယ့်အထာ ဆိုတော့ ….
စိတ်ထဲက ရှိသလို ကိုယ်ပိုင်ဟန်နဲ့ တစ်ယောက်တစ်မျိုး ဆုရစာရင်း ထုတ်ပြန်ကြတာပါ။
အားပေးလို့ ကျေးဇူးတင် ၀မ်းသာပါတယ်။
ရွှေကြည်လေးရဲ့ ကိုယ်ပိုင်စတိုင်လေးတွေကိုလည်း မျှော်လင့်နေပါတယ်။ :hee:
ချစ်မမရေ မိရွှေကြည်က ကလောင်စွမ်းမထက်ပါဘူးရယ်..။
ဒါပေမယ့် ညံ့တော့မညံ့အောင်ကြိုးစားရမှာပေါ့။ ဒါမှရွာကိုစောင့်ရှောက်ရာသိတတ်ရာရောက်မှာပေါ့နော။
ဆိုက်ပျက်စေချင်တဲ့သူထဲမှာတော့ ကိုပေါက် မန်းတလေး မပါတာ အမှန်ပဲဗျ
“““ လူခင် မူပြင် ””” ဆိုတာလေးကို အရင်ဆုံး ပြေးမြင်ပေးပါ
ရွာထဲကအလှူလုပ်သမျှ ကိုပေါက် အားလုံးကူညီပေးခဲ့တာကို မမေ့ပါနဲ့ 
ရွာထဲကလူတွေ မန်းတလေးကို လာလည်သမျှ အရင်ဆုံး အလုပ်ကနေ အချိန်အများကြီးပေး ၊ ဧည့်ခံတာ ကိုပေါက်ပါ
နောက်ပြီး… ဒီပွဲကို စဖို့ ပြောတုန်းက
“““ ရွာကြီးက စစ်တပ်ဖြစ်သွားပြီလား ””” လို့ကျုပ် မန့် တုန်းက ၊ ကိုပေါက် တားခဲ့လို့ ၊ အဲ့တုန်းက ပေမရှည်ခဲ့တာပါ
ကိုပေါက်ရဲ့ ရွာ့အရေးမှာ လက်မနှေးတာလည်း လူတိုင်းအသိပါ။
ကိုပေါက်ကို ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်တယ်လို့ မထင်ပါဘူး။
ကိုပေါက်ဆိုတာက ရွာထဲမှာတင်မက အပြင်လောကမှာပါ တွေ့ဆုံခင်မင်နေသူမို့…
မောင်ရင်းနှမလို ပြောမနာ ဆိုမနာတွေပါ။
သူပြောလို့ ကိုယ်စိတ်မဆိုးသလို ကိုယ်ပြောလို့လည်း သူစိတ်မဆိုးဘူးလို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
လူအများနဲ့ လုပ်ကိုင်ရတဲ့အခါမှာ အမှားအယွင်းအလွဲအချော်လေးတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။
မေ့လျော့ပေါ့ဆ မှားယွင်းမှုတွေ ရှိရင် လူတိုင်းကိုယ်စီ သဘောထားကြီးကြီးထားပြီး တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အပြန်အလှန် သည်းခံခွင့်လွှတ်ကြစေလိုပါတယ်။ နားလည်မှုပေးကြစေလိုပါတယ်။
ကိုပေါက် ပြောသလိုပဲ သူသူကိုယ်ကိုယ် လွှတ်ချစရာတွေ အများကြီးပါပဲ။ :buu:
အရင်တုန်းက မောင်ပေ လဲ ကိုပေါက်လိုမျိုး ခံစားခဲ့ရဖူးတယ်
ကလေးအတွေးနဲ့ တွေးရင် ကို အဖြေထွက်ပါတယ်
တစ်ချို့ပို့စ်တွေဟာ စတစ်လုပ်သင့်ပေမယ့် သူကြီးမအားတာ မျက်စိမှောက်တာနဲ့ စတစ်ကီမဖြစ်ပါဘူး။
ဥပမာ ကိုဘလက်ရဲ့ ?ဂျူလိုင်ချိုပေါ့ကျထင်တယ်၊တင်ပြီး တစ်ပတ်လောက်ရှိမှ စတစ်ဖြစ်တယ်။ကြောင်ဝတုတ်ရဲ့ အလှူပို့စ်ကိုလည်း စတစ်လုပ်ပေးဖို့ ပြောယူရတယ်။
ဒါပေမယ့် အဲဒီနိုဝင်ဘာမှာ သူကြီး ပုံနှိပ်သတင်းစာထုတ်ဖို့ အသည်းအသန်ခဲမှန်နေပုံရပါတယ်။
မော့တွေကလည်း ကိုယ့်ဝမ်းစာရေးတွေနဲ့ဆိုတော့ လူမျိုးရေးငြိမယ့်အငြင်းအခုန်ပို့စ်တွေကလွဲရင် အရေးတကြီး မတို့ထိတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ကိုပေါက်ကို စတစ်မလုပ်ထားလည်း ကျမတို့က ဘေးက comments by post က ရှာဖတ်တော့ တွေ့ပြီး စတစ်မဖြစ်တာတောင် သတိမရမိလိုက်ဘူး။
အဲတော့ ကိုကြီးပေါက်နဲ့ မောင်ပေရယ် ဖြည့်တွေးပြီး ခွေးလွှတ်လိုက်ပါလို့ တောင်းပန်ပါတယ်။
အခုရက်ပိုင်း အင်တာနက်လိုင်း အဆင်မပြေဖြစ်နေလို့ ရွာထဲဝင်ရခက်နေတာနဲ့ပဲ နောက်ကျသွားတယ် …
၅ ကြိမ်ဆက်တိုက် အကြိုက်ဆုံးပို့စ်ရွေးခဲ့တာ ဒီတစ်ခါမှပဲ အများနဲ့အကြိုက်တူသွားတော့တယ် …
ဘရာဗိုပါ ဦးကျောက်ခဲ ….
ကိုယ့်အားထုတ်မှုက အကျိုးဖြစ်ထွန်းသွားတယ်ဆိုတာ သိရတော့ ၀မ်းသာစရာပါ။
အဲဒါလည်း ဖတ်ရွေးလုပ်ရတဲ့ ပီတိပဲပေ့ါ။ :hee:
ကျမက အမြှောက်တော့ မကြိုက်ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် အန်ကယ်ကြီး ကွန်မန့်ဖတ်ပြီး ပါးစပ်စေ့မရလို့ သွားအအေးပပ် သွားတယ်။ :harr:
နောက် တစ် page ခွဲ သင့်ပါပြီ ဗျို့  .. comment တွေ မမြင်ရတော့ဘူး . ထပ်ကုန်ပြီ။
အဆင်ပြေရင် Chrome ကိုပြောင်းသုံးစေချင်ပါတယ်…
ဟုတ်သေးဘူး ၊ ကြောင်ဝတုတ်ရဲ့ ။
အဘ လဲ အခု Firefox နှင့် သုံးနေတာ ၊ အဆင်ပြေနေတာပဲ ။
ဘာ commentမှ မထပ်ပါဘူး ။
အဘ လည်း M လုင် ကို မနက်ကတည်းက မေးမလို့ ။
သူ့ဖက်မှာ ဘာတွေ ဖြစ်နေသလဲလို့ ။
အစက ထင်တာက … plug in က အော်တို page ခွဲ ပေးတယ် ပဲ ထင်တာ ……. ဂစ်ဂစ် .. ခုက ကိုယ်တိုင် ၀င်ခွဲ ပေးရတာ ကိုး … :-)
နောက်ကျနေတဲ့ ကွန်းမန့် အတွက် ခွင့်လွှတ်ပေးပါ မမ ခင်ဗျား…။
အရင်ကလို မဟုတ်တော့တဲ့ ဘ၀ပေးအခြေအနေအရ…
သွားလိုက်ရပ်လိုက် နိမ့်လိုက်မြင့်လိုက် လောကကြီးပါလားကွယ်တို့…။
လာမယ့်ဘေးပြေးတွေ့ ပို့စ်တွေကိုရေးခဲ့တဲ့ မမ အတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ် ခင်ဗျာ…။
ချက်ခြင်း ကွန်းမန့်ဝင်ရေးခဲ့လို့ မှတ်မိနေပါတယ်…။
နောက်ကျပေမယ့် ၀တ္တရားမပျက် လာမန့်ပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
လောကသားတွေမို့ ကိုယ်စီကိုယ်စီ ကိစ္စများကြမယ်ဆိုတာကို သဘောပေါက်ပါတယ်။
လောကရဲ့ သဘာဝ :eee:
အမတစ်ယောက်၊ ညီမတစ်ယောက် ကြားက အလတ်(လပ်)မမို့
post ဖတ်ပြီး ကိုကျောက်ခဲ လိုအကိုတစ်ယောက် ရှိခဲ့ရင် လို့ တွေးမိတဲ့ထိပါ…
ဝေေ၀ က ဖားအောက် ကို ပို့ပေးမယ်။
ဆူး က ဗောဓိရိပ်ငြိမ်ကို ပို့ပေးမယ်။
ကျမ က ပဏ္ဍိတာရာမ တောစခန်းကို ပို့ပေးမယ် လို့ ….
ပြောထားဖူးလို့ ပြန်မလာရဲဘူး ဖြစ်နေတယ်။
ကွန်ဂရက်ကျူလေးရှင်း ပါ ဦးကျောက်ရေ…
စာပေဆုရသူကို ကြေငြာပေးတဲ့ အန်တီမမရဲ့ လက်စွမ်းကလည်း မသေးပါဘူးနော်..
ရွာရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ပါဝင်အားပေးလေ့ရှိလို့ မှတ်မှတ်ရရ ရှိနေပါတယ်။
ဆုပေးပွဲကို လာနိုင်ရင် လာဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နော်။ :hee:
နည်းနည်းနောနော ကွန်မန့်တွေ.မဟုတ်ဘူး ။
ကြုံ လို့မေးပါရစေ..
အဲ.ကြေငြာ..ဆိုတဲ့ စကားလုံး.. မှန်လား..မှား လား…။ ဇဝေဇ၀ါ..။
အိမ်ရောက်မှ သတ်ပုံကျမ်း ပြန် လှန်မယ် ။
ကြုံလို့ ..ပြောရ ပါဦးမယ် ။
ဂဇက်မှာ..စာတွေ.. စရေး ကတည်းက…
ဆုတွေ ဘာတွေ .ဘာမှ မမျှော်လင့်ပဲ.ရေးခဲ့တာ ။
ခံစားချက်ကို ဖော်ထုတ်ခွင့်လေး ရရင်ကို ကျေနပ်နေခဲ့တာ ။
ဒါပေမယ့်.. ဆု အစီအစဉ်တွေကလည်း..ပေါ်ပေါက် လာ..
သားသားရဲ့ အက္ခရာတွေ.ထဲက တချို့စာသာလေးတွေကိုလည်း..
ဆန်ခါတင် စာရင်းထဲ.. ၀င်ရောက်လာတာ….
သူများ..တွေကလည်း… ပိုစ်တွေကို ကောင်းသထက် ကောင်းလာအောင် အားထုတ် ကြိုးစား
ဆု… ကို အိပ်မက် မက်လာပါတော့တယ် ။
ဆန်ခါတင်..စာရင်းထဲ..မှာ…တော့… ပါစေရမယ်.လို့ …
အိပ်မက်တွေ.. မက်ခဲ့ပါရဲ့။ တစ်ပုဒ်ထက် တစ်ပုဒ် ကောင်းအောင် ပိုကြိုးစားမိပါရဲ့။
(မရှက်မကြောက် ၀န်ခံချက် ။)
အန်တီပုဒုမ္မာ ရဲ့ အပိုဆု…
တော်တော်လေး.. ဆွဲဆောင်နိုင်သွားတယ် ။
သားသားက..မွေးနေ့လက်ဆောင်လို..တခြားလက်ဆောင်လို..ပေးလာရင်လည်း
တဖွဖွတသသ မက်မောတတ်တဲ့စာရူးပေရူးဆိုတော့ကာ…
အန်တီ့ ရဲ့ အပိုဆု ကလေးက..
သားသားတို့လို.. စာအုပ် ချစ်သူ လုူငယ်တွေအတွက်..
ဘယ်စာအုပ် တောင်းဆို မလဲ..ဆိုတာကို ပါ.. စာအုပ်တိုက်ထဲ.. ပတ်မွှေ ကြည့်မ်ိတဲ့ အထိ ။
(အဲဒါ.. ပြီး ခဲ့တဲ့ လ ကပေါ့ ။ ပြီးခဲ့တဲ့ လ … ဆန်ခါတင်စာရင်းထွက်လာတော့.
သားသူငယ်ချင်းတွေကပြောတယ် ။ မင်း..ရ မှာ..တဲ့။ မင်း စာတွေက
တကယ်ကောင်းတယ်..တဲ့။ မြှောက်ပေးကြတော့… သားလည်း..
ဟုတ်ပြီပေါ့..နော် ။ စာအုပ်တိုက်ထဲ.. ပတ်ပြီး.
ဆုရ.ရင်တောင်းဆိုမယ့်.. စာအုပ် လိုက်ကြည့်မိတယ် ။ ဆရာတက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင်ရေးခဲ့တဲ့ 
စာပေ..ရသ သဘောတရား စာအုပ်တစ်အုပ်ကို..( ဖတ်ဖူးပေမယ့် လက်ဝယ်မရှိသေးလို့ ) မြတ်နိုးသွားပြီး.
သား သာ.. ဆုရရင်..
အဲဒီ စာအုပ်တောင်းမယ်..လို့ .. စိတ်ကူး ယဉ်ခဲ့ဖူးတယ် ။ )
အဲဒီ… အပိုဆု..စာအုပ် တစ်အုပ်တောင်းဆိုခွင့် ဆိုတာလေး..က
ချစ်စရာ လက်ဆောင်လေး..ပါလို့ ..။
ကြုံ လို့ .. ၀င် ပြောမိတာပါ ။
င်္ဒီလ ဆုရရှိသွားတဲ့ ..
ကွန်ဂလက်ကျူလေးရှင်းပါ….လို့။
အန်တီပဒုမ္မာ ပြောသလို ဦးဦးလည်း..
စာကောင်းတွေ.. များများဆက်ရေးပါဦးနော် ။
ဆု ရပြီး မှ….ပျောက်မသွားပါနဲ့ ဦး..။
ဂဇက်ရွာ အတွက်.. အလှ ပဒေသာလေးတွေမို့ …
ရွာ ပိုလှ စေပါတယ် ။
အစဉ်..အမြဲ… လှပ ဝေစည်နေမှာ..လို့ မြင်မိပါတယ် ။
ပို ကောင်းလာမယ့်..စာတွေကို ရေးနိုင်ဖို့ ..
လူစုံတဲ့ နေရာမို့ ..
လေပေါ သွား ပါတယ် ခညာ ။
ပြောမှားဆိုမှာ.ပါရင်.. ခွင့်ခွင့်လေး.လွှတ် ကြပါနော့ ။